अ to्ग्रेजीबाट बंगाली अनुवाद – Vocre
अ to्ग्रेजीबाट बंगाली अनुवाद
अनुवाद सेवाहरूको लागि एक प्रीमियम भुक्तान नगरी द्रुत र सटीक बंगाली अंग्रेजी अनुवाद आवश्यक छ? व्यापार वा शिक्षा अनुवाद को लागी केहि विकल्पहरु खोज्नुहोस्.
अन्य संस्कृतिहरूसँग सञ्चार गर्दै मुश्किल हुन सक्छ. अ to्ग्रेजीबाट बंगाली अनुवाद विशेष रूपमा गाह्रो हुन सक्छ. बंगाली भाषाले जर्मनिक भाषाहरूबाट व्युत्पन्न भाषाहरू भन्दा फरक वाक्य संरचना र अक्षरहरू प्रयोग गर्दछ. चाहे तपाइँ बंगाली भाषा सिक्दै हुनुहुन्छ व्यापारका सहयोगीहरुसँग कुराकानी गर्न वा किनकि तपाईँ हुनुहुन्छ विदेशमा अध्ययन, अ Bengali्ग्रेजीमा बंगालीमा कसरी अनुवाद गर्न सजिलो हुन्छ - कुनै अनुवादकलाई काममा लिए बिना.
बंगाली (बंगला पनि भनिन्छ) बंगलादेशमा दक्षिण एशियाभरि बोल्ने भाषा हो, पश्चिम बंगाल, र तल्लो असम. यो क्षेत्रभरि व्यापक रूपमा बोल्दछ र दक्षिण एशियामा दोस्रो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भाषा हो - दोस्रो हिन्दी मात्र. 265 विश्वभरि करोडौं मानिस बंगाली बोल्छन्; 228 ती मध्ये लाखौंले उनीहरूको पहिलो भाषाको रूपमा भाषा बोल्छन्. यो संसारमा सातौं सबैभन्दा धेरै बोलिने भाषा हो.
अ Bengali्ग्रेजीमा अ Bengali्ग्रेजीमा अनुवाद गर्नु अरू भाषाहरूको तुलनामा मुश्किल हो.
अ language्ग्रेजी भाषामा जस्तै, बंगाली व्याकरण लि gender्ग प्रयोग गर्दैन; यद्यपि, वाक्य संरचना अंग्रेजी भन्दा फरक छ किनकि यसले एक विषय प्रयोग गर्दछ, वस्तु, बिषयको सट्टा क्रिया संरचना, क्रिया, वस्तु संरचना.
बंगाली शब्द टाटसमाबाट आएको हो, ताडभाबा, Avahaţţha, बिदेशी, र देसी वा खन्नाटी शब्दहरू. भाषाका विद्यार्थीहरूले केही अंग्रेजी शब्दहरू पहिचान गर्न सक्दछ जुन माथिका भाषाहरूबाट लिइएको हो.
बंगाली अनलाइन सिक्ने कोशिश गर्दै? हामी मेशिन अनुवाद सफ्टवेयर प्रयोग गर्न सुझाव दिन्छौं जुन आवाज वा पाठको माध्यमबाट सजिलै अनुवाद गर्न सकिन्छ, जस्तै Vocre अनुप्रयोग, मा उपलब्ध गुगल प्ले एन्ड्रोइड वा को लागी एप्पल स्टोर IOS को लागी.
को बंगाली (वा बंगला) वर्णमाला मा आधारित छ बंगाली / असमिया लिपि र बंगाली भाषामा प्रयोग भयो.
अंग्रेजी शब्दकोश जस्तो छैन, बंगाली शब्दकोशसँग यो भन्दा बढि छ 150,000 शब्दहरु. वर्णमाला छ 28 अक्षरहरू जुन जर्मनिक भाषाहरूबाट निकालेका अक्षरहरू भन्दा पूर्ण रूपमा भिन्न छन्.
अ Bengali्ग्रेजी बंगाली अनुवादकहरू प्राय: माथिबाट शुल्क लिन सक्छन् $50 एक घण्टा. जब यो पाण्डुलिपि को अनुवाद को लागी आउँछ, ठूलो पदहरू, र चिकित्सा रेकर्ड, ठाडो शुल्क तिर्न पूर्ण रूपमा मूल्यवान छ. तर के हुन्छ यदि तपाईलाई एक अंग्रेजी अनुवादक व्यक्तिगत कारणले वा केवल तपाईंलाई बंगाली सिक्न मद्दतको लागि चाहिन्छ?